Star Wars: The Force Awakens Now Available on iTunes | Avy amin'ny mac aho
Ny fahombiazana lehibe farany an'i Hollywood, dia tonga tao amin'ny sinema tanan'i Disney, taorian'ny nividianany ny zon'i George Lucas. Star Wars: Ny Force Awakens dia nanjary iray amin'ireo sarimihetsika haingana indrindra dia namaky firaketana maro an-tsoratra taloha fa mandraka androany, efa-bolana taorian'ny premiere nataony, dia mbola tsy naharesy ny fanangonana an'i Avatar.
Ny veteranina JJ Abrams no talen'ny komisiona Disney ity sarimihetsika farany ity, izay izy koa no niandraikitra ny fitantanana sy ny famokarana azy, izy koa no mpanoratra. Araka ny efa notaterinay teo aloha, nanomboka omaly ilay sarimihetsika azo vidiana izao amin'ny alàlan'ny iTunes, amin'ny kalitaon'ny HD 13,99 euro na amin'ny kalitao SD amin'ny 11,99 euro.
Fa raha tokony hividy azy ianao dia tsy te-hanofa azy fotsiny, fa hiandry ny 20 aprily ho avy ianao, ny daty hahatongavany amin'ny iTunes amin'ny endrika fanofana. Ny tsy fantatsika dia ny hoe ity safidy ara-barotra ity dia hanome fidirana amin'ireo fanampiny marobe izay tafiditra ao amin'ny fividianana ny sarimihetsika.
Mifanohitra amin'izay efa honohono, tamin'ny farany ny kinova HD misy ao amin'ny iTunes dia mamela antsika hiditra amin'ny atiny fanampiny amin'ny sarimihetsika toy ny amin'ny Blu-Ray sy ny kinova DVD. Noho ireo fanampim-panazavana misy miaraka amin'ilay sarimihetsika, dia ho hitantsika ny tantara feno ao ambadiky ny fandefasana ilay horonantsary, amin'ny alàlan'ny filaharana amin'ny antsipirihany sy dinidinika manokana miaraka amin'ireo mpisehatra sy ny talen'ny horonantsary JH Abrams.
Ao amin'ny fanadihadiana hafa mitondra ny lohateny hoe Ny fifohazana tantara: Famakiana ny script, ho hitantsika ny fiheverana voalohany an'ireo mpilalao sarimihetsika tamin'ny andro namakian'izy ireo voalohany ny script an'ilay horonantsary. Fa azontsika atao ihany koa ny miditra amin'ireo fanadihadiana hafa mitondra ny lohateny hoe New zavaboary, Building BB-8, Tetikasan'ny ady miaraka miaraka amina seho voafafa taonina ary maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iTunes » Star Wars: The Force Awakens Now Available on iTunes
Ny Apple Watch 2 dia mety hahatratra 40% manify noho ny teo alohany